Ilay sary miafina amoron-dranomasina noforonin'ny mpanakanto Lia Melia | Famoronana an-tserasera
Ny zava-kanto mahatalanjona dia mety hiteraka mamorona sary azo ialana zava-misy tanteraka ary noforonina tao an-tsain'ny olona iray izay mandinika ny asan'ny mpanao hosodoko sasany izay maniry fatratra an'io endrika fanehoana io.
Ilay mpanao hosodoko anglisy, Lia Melia, dia nitondra an'io hevitra tsy azo lavina io marinina izay tapaka ny onja miaraka amina endrika tsara hamihina ny morontsiraka. Miaraka amin'ireo pigment vovoka nopotehina sy nopetahany alimo na vera dia nandoko ireo sangan'asa kanto ahafahantsika mandositra tanteraka mandritra ny fotoana fohy amin'ny fandinihana fotsiny.
Azo raisina ho toy ny banal nataon'ny sasany satria imbetsaka ianao dia afaka mieritreritra fa mora ny mamorona amin'ny hadalana kely sy ny faharanitan-tsaina. Saingy betsaka ireo izay mazoto amin'ity fomba fanehoana ny heviny ity ary tokony hanananao ny talenta marina mba tsy ho lasa tsy fahalalam-pomba sy tsy fahalalam-pomba na tsotra.
I Melia tenany mihitsy no miresaka momba ny mpampianatra azy izay nampianatra azy fa tsy dia zava-dehibe loatra ny fananana teknika tena tsara, fa kosa ny fo sy ny fanahy koa mahay mandoko hiteraka asa mendrika ny fiderana.
Indraindray i Melia dia mampiasa fifangaroan'ny tsiranoka hahitana ireo firafitra ireo sy izany mampifangaro loko miteraka vokany tena manaitra ary afaka manome vintana ny hamorona rafitra samihafa ho herin'ny natiora voajanahary. Ny lohan'ity lahatsoratra ity no mety indrindra hanehoana izany.
Ny fanandramana dia toetra iray hafa amin'ny toetran'io karazana zavakanto io ary betsaka noho ny lazain'i Melia rehefa mankafy izy mampifangaro ireo pigment vovoka ireo hahitana ireo fitambarana mahaliana indrindra.
Ianao dia manana ny facebook-nao y ny tranonkalanao Afaka manaraka ny asany misintona izay itadiavan'ny ranomasina.
Karazana zavakanto tsy azo ovaina hafa, fa ny solosaina kosa novokarina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny zaridainan'i Lia Melia